Wasiirka arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka oo faahfaahin ka bixiyay qorshaha wasaaradda ee 100 maalmood | Radio Muqdisho
Wasiirka arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka oo faahfaahin ka bixiyay qorshaha wasaaradda ee 100 maalmood
Published on November 28, 2012 by Mowliid · 2 Comments · 3,923 views
Wasaaradda arimha gudaha iyo amniga Qaranka ayaa sheegtay in ay wado qorshayaal kor loogu qaadayo hey’adaha aminga isla markaana dib loogu eegayo maamulada gobolada dalka kajira laguna xoojinayo gargaarka dadka tabaaleysan.
Wasiirka Arrimha Gudaha iyo Amniga Qaranka Soomaaliya Mudane C/kariin Xuseen Guuleed oo wareysi siiyey Idaacadda Qaranka ayaa ka hadlay qorsheyaasha dhinaca amiga u degsan dowladda muddooyinka soo socda.
‘’Waxan ahmiyadda koobaad siinaynaa xoojinta amniga iyo xasilinta dalka, maadaama ay tahay lagama maarmaan, iyadoo lagu dhinac wado dhismaha maamullada gobollada dalka iyo dib u dejinta dadka barakacayaasha ah.’’ Ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka Somaliya.
Sidoo kale wasiirka Arrimaha ayaa dabaalka ka qaaday in wasaaraddiisa ay xoogga saari doonto dib u habeysnta ciidamada Booliiska iyo nabadsugida si wax looga qabto ammaanka dalka, iyo shuruucda lagu dhisayo maamulada gobolada iyo degmooyinka iyadoo lagu jaangooynayo nidaamka Federaalka ah.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa billaawday fulinta isbaddelkii ay dhawaan balan qaadday ee ku aadanaa dhinaca ammaanka, dhismaha maamulada gobolada iyo dib u dejinta barakacayaasha.
C/qadir muclin maxamud says:	November 28, 2012 at 12:49 pm	Mashaa.lahu waan sogenaa go.aanada aad qadaten e alaha hafududeyo by
Reply »	Ali Mohamoud Jama' says:	November 30, 2012 at 1:47 pm	waxaan leenahay allaha idinla garab Gal xilka aad qaadeen dad weynaha sidoo kaleeto waxbaad ka sidaan xilkaan ee wada shaqeyn wacan cacmo is qabsi iyo Guul